गाउँका युवा गोरु जोत्दैनन्, विदेश पुगेपछि गधा जोत्छन् !!
गाउँबाट सहर हुँदै विदेश गइरहेका युवालाई गाउँघरमै रोजगारी दिने र त्यस्ता रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने केही काम भएका छन् त ? युवालाई स्वरोजगार बनाउनको लागि हामीले त धेरै कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । तर युवाहरु काम गर्न तयार छैनन् । बाँझो जग्गा पुराना झारपातले बुट्टयान भैसकेका छन् । नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ । ३० रोपनिभन्दा माथि खेती किसानी गर्ने वा सँगै खेती सँगै वनजङ्गल बनाउनुस् हामी अनुदान दिन्छौँ भनेका छौं ।
तर मानिसहरुले गरिरहेका छैनन् । तर विदेश गएपछि गाउँघरमा काम पाएनौँ भनेर गुनासो गर्छन । अहिले धेरै मानिसले भैँसी पाल्न छाडिसके । गोरु जोत्न छोडिसके । विदेशमा बरु गधा जोत्न रुचाउछन् तर आफ्नै जग्गामा गोरु जोत्दैनन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारको नीति राम्रो आउनुपर्‍याे । हामीले बोलेर कराएर के हुन्छ ? भैंसीपालनका लागि भारतको हरिद्वारबाट ल्याएर आठ वटा राँगा वितरण गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष बोका पनि वितरण गरेका छौं । कुखुरा वितरण गर्ने गरेका छौँ ।
पोषणयुक्त क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि प्रत्येक वर्ष बीउविजन वितरण गर्ने गरेका छौं । प्रत्येकको घरमा करेसाबारी हुनुपर्छ ।
तरकारी लगाएको हुनुपर्छ । तरकारी खाएको हुनुपर्छ भनेर करेसाबारीको अवधारणा ल्याएका छौं । तर उपलब्धी देखिदैन । कृषि शाखा छ, त्यहाँ छुट्टै बजेट छुट्टयाएको छ । हामी आइसकेपछि यस नगरपालिकाका १४ वटै वडामा कृषि प्राविधिक राखेका छौं । पशु प्राविधिक राखेका छौं । तर पनि नागरिकले नगरपालिकाबाट सेवा सुविधा लिन सकेका छैनन् ।
मंगलसेन नगरपालिकाका सबै ठाउँमा गाडीको सेवा सुविधा छैन । धेरै वृद्धवृद्धालाई सामान्य लेखपढ गर्न पनि आउँदैन । सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तपाईको पालिकाले कसरी वितरण गर्दै छ ?
मंगलसेन नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट नगरपालिका हो । सबैभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने हामी हौँ । असोजमा वितरण गरिसक्छौं । फागुनभित्र वितरण गरि सक्छौं । असारको पहिलो हप्ता वितरण गरि सक्छौं । अहिले बैंकमार्फत वितरण गर्ने गर्छौ । १३ नम्बर वडा धेरै विकट छ । त्यहा आफै उपस्थित भएर बाड्ने गथ्र्यौ । त्यसलाई पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याइएको छ ।
तपाईको पालिकामा विद्यालय शिक्षाको अवस्था के छ ? विद्यालय शिक्षाको अवस्था अस्तव्यस्त छ । शिक्षक छैन । दरबन्दी छैन । दरबन्दीका शिक्षक छैन । भौतिक संरचनाको अभाव छ ।
विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको छ, यति धेरै लापरबाही किन गर्नु भएको हो ?
हामीलाई बजेटको अभाव पनि छ । तालिमप्राप्त शिक्षकको अभाव छ । शैक्षिक साम्रगीको अभाव छ । अभाव नै अभाव छ । विद्यालयको पहँुचभन्दा बाहिर प्रायः हाम्रो नगरपालिकामा छैन ।
धेरै जसो अभियान सञ्चालन गरेका कारणले पनि विद्यार्थी विद्यालयमा आउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा फराकिला कोठा छन् । शिक्षक छन् । शैक्षिक साम्रगी छन । त्यहाँ भर्ना दर कम छ । कोठा पनि नभएका, टिनका छानामुनि पढाइने निजि विद्यालयमा भने भर्नादर बढि छ । यतातिर अलिकति सरकारको नीतिमा पनि केहि परिवर्तन हुन आवश्यक छ । नीति माथि अर्कै हुन्छ, तल अवस्था अर्कै छ । अनि कसरी सुधार हुन्छ ?
अछामको सदरमुकाम हो, मंगलसेन । सदरमुकाम भएकै कारण मंगलसेन नगरपालिकामा विकासको आशा स्वभाविक छ । प्राकृतिक स्रोत साधनले र पर्यटकीय सम्भावना रहेपनि यो क्षेत्र सोचेजस्तो तवरले विकास हुन सकेको छैन । कालिका मन्दिर, कैलाशमुठ, जिमराडी, भट्टे मालिका, ठुलासैन मालिका जस्ता धार्मिक क्षेत्रले मंगलसेनलाई विशेष बनाएको छ । यस्तै अछाम दरबार नेपालको पुरातात्विक सम्पदामध्ये एउटा हो ।
जसले पश्चिम नेपालको तत्कालीन राज्यशक्तिको भौतिक संरचनाबारे पर्याप्त महत्व राख्छ । प्राकृतिक र ऐतिहासिक महत्वका पर्यटकीय क्षेत्रसँगै अरु समग्र विकासमा पनि मंगलसेन नगरपालिकाको काम सन्तोषजनक नभएको स्थानीयको भनाइ छ । यसै विषयमा मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहरासँग खबरहबका लागि माधव तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
२०७८ फाल्गुन २२, आईतवार प्रकाशित0Minutes 101 Views